विन्डोज १० मा डीभीडीहरू नि: शुल्क रूपान्तरण कसरी गर्ने (डिभिडियानि प्ले नभएको फिक्स गर्नुहोस्) - प्रायोजित
के तपाईंसँग बहुमूल्य सम्झनाहरूका साथ डिभिडिको पुरानो संग्रह छ र केहि कम्प्युटरमा कुनै डीभीडी प्लेयरहरूसँग प्ले गर्न सकिँदैन? समस्या मध्ये एक डिभिडी डिकोडरको अभाव हुन सक्छ। यस अवस्थामा, तपाईं तिनीहरूलाई डिजिटल ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं प्ले गर्न चाहानुभएको केहि डीभीडी पहिले नै बिग्रिएको छ भने, तपाईं एक पाउन सक्नुहुन्छ त्रुटि पढ्नुहोस् जब तपाईं कम्प्युटरमा डिस्क घुसाउनुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईं डिस्क प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्न, तपाईंलाई डीभीडी रिपर चाहिन्छ जसले रिप र कुनै डीभिडी डिस्क, आईएसओ छवि, वा DVD फोल्डरहरू हार्ड ड्राइभमा प्रतिलिपि गर्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ डिभिडिको अर्को ढाँचामा डाटा झिक्न थुप्रै डिभिड नि: शुल्क उपलब्ध छन्। यहाँ हामी प्रतिनिधित्व गर्दछौं WinX DVD रिपर प्लेटिनम बजारमा उपलब्ध उत्तम डिभिडि रिपर, मात्र होइन डिजिटल प्रारूपमा RIP DVD पनि समर्थन गर्दछ संरक्षित डीभीडीहरू र तिनीहरूलाई अन्य ढाँचाहरूको लागि MP4 मा रूपान्तरण गर्न सक्दछ।
सामग्रीहरू देखाउनु १ WinX DVD रिपर प्लेटिनम १.१ WinX DVD रिपर प्लेटिनम सुविधाहरू १.२ WinX DVD रिपर प्लेटिनम प्रयोग गरेर DVD चलचित्रहरू रिप कसरी गर्ने १.3 WinX DVD रिपर प्लेटिनम निःशुल्क?
विन्डोज १० बाट माईक्रोसफ्ट एज हराईरहेको छ
WinX DVD रिपर प्लेटिनम
सामान्यतया, DVD रिप्पर एक सफ्टवेयर अनुप्रयोग हो, हार्ड डिस्क ड्राइभमा DVD सामग्री प्रतिलिपि गर्न प्रयोग। र डिभिडिको डाटालाई अर्को ढाँचामा रूपान्तरण गर्दछ ता कि भिडियोहरू डिभिडाहरू प्ले गर्न सकिन्छ जुन डिभिडहरू समर्थन गर्दैन। तर केहि नि: शुल्क डिभिडि रिपरहरूले प्रत्येक फाईल ढाँचा समर्थन गर्न सक्दैन, डीभिड र रिप अधिक गर्न लामो समय लिन्छ। बारेमा कुरा गर्नुहोस् WinX DVD रिपर प्लेटिनम तपाईंको स्रोत भौतिक डीभिडी डिस्क, DVD आईएसओ छवि, वा DVD फोल्डर हो कि होइन, यो हो उत्तम डीभीडी रिपर तपाइँलाई द्रुत रूपमा MP4, AVI, WNV, र लोकप्रिय भिडियो स्वरूपहरूको दायरा उच्चतम सम्भावित गुणवत्तामा रूपान्तरण गर्न सक्षम गर्दछ। हामी भन्न सक्दछौं कि यो नयाँ डीभिडी,-99-शीर्षक डीवीडीहरू, कसरत डिभिडिहरू, अन्तर्क्रियात्मक डीभीडी स्क्यानि system प्रणालीको साथ बिग्रिएको डीभीडी र नयाँ शीर्षक जाँच संयन्त्रको लागि एक आदर्श समाधान हो।
WinX DVD रिपर प्लेटिनम सुविधाहरू
सुविधाहरूको बारेमा कुरा गर्ने यो एक मात्र DVD रिपर उपकरण हो जुन स्तर-3 हार्डवेयर त्वरणमा पुगेको छ।
WinX डीभीडी रिपर प्लेटिनम एक मात्र अद्वितीय डीवीडी रिप्पर हो जसले दुवै CPU र GPU स्तर -3 हार्डवेयर त्वरणलाई Intel QSV र NVIDIA (CUDA) NVENC को उपयोग गरेर समर्थन गर्दछ, त्यो तेज गतिलाई द्रुत पार्ने मात्र नभई उच्चतम सम्भावित गुण पनि राख्दछ। WinX विकासकर्ताका अनुसार, सम्पूर्ण डिभिडिको प्रतिलिपि गर्नको लागि लगभग minutes मिनेट लिन सक्दछ।
यदि तपाईंले त्यो पाउनुभयो तपाईंले च्याप गर्न खोज्नु भएको DVDs सँग प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण वा त्यस्तै केही छ , यसको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। WinX DVD रिपर प्लेटिनम सुरक्षित डीवीडी समर्थन गर्दछ र रूपान्तरण गर्न सक्दछ डिज्नी प्रतिलिपि-सुरक्षित डीवीडीहरू MP4 मा नि: शुल्क अन्य ढाँचाहरूको लागि।
खैर, केहि अन्य सुविधाहरू सामेल छन्।
सबै प्रकारका डीभीडीहरूबाट डाटा ल्याउन सक्षममा सामान्य, घरेलु, व्यावसायिक, पुरानो स्क्र्याच, आईएसओ छविहरू, डीभीडी फोल्डरहरू समावेश छन्।
यसको समर्थन लगभग सबै लोकप्रिय ढाँचाहरूमा MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPEG, MP3, TS, र अधिक समावेश छ।
साथै सबै मुख्य स्ट्रिम उपकरणहरूमा आईफोन, आईप्याड, एप्पल टिभी, एन्ड्रोइड, सामसु,, सोनी र अधिक समावेश गर्दछ।
तपाईंलाई कच्चा डीभीडी फाइलहरू च्याप गर्न अनुमति दिँदछ जस्तै भिडियो टीएस फोल्डरहरू र डिस्क छवि जुन अन्य डिभिडि रिपरहरू प्रदान गर्न विफल हुन्छन्।
साथै त्यहाँ निर्मित भिडियो सम्पादक पनि छ, केही सामान्य प्रकार्यहरू प्रदान गर्दछ जस्तै भोल्युम समायोजन, उपशीर्षक थप, क्रप, विस्तार, र ट्रिम।
WinX DVD रिपर प्लेटिनम प्रयोग गरेर DVD चलचित्रहरू रिप कसरी गर्ने
WinXDVD रिप्पर प्लैटिनमको प्रयोग गरेर रिप डीभिडी सरल र सजिलो छ। जब तपाईं अनुप्रयोग सुरू गर्नुहुन्छ तपाईं एक सरल, दृश्यात्मक पहुँच योग्य मेनू स्क्रिनको साथ प्रस्तुत हुनुहुनेछ।
शीर्षमा, विकल्पहरूमा, हामीसँग पूर्वनिर्धारित अडियो भाषाहरूको चयन छ। साथै, केहि अन्य विकल्पहरू जस्तै आउटपुट फोल्डरहरू छनौट गरेर र काम समाप्त भएपछि पीसी बन्द गर्न वा बन्द गर्न विकल्प।
DVD फर्म डिस्क आयात गर्न दिनुहोस्, क्लिक गर्न डिस्क सेक्सन र ब्राउज गर्नुहोस् इच्छित डिस्क, छवि वा फोल्डरका लागि ब्राउज गर्नुहोस् जुन तपाई रिप गर्नुहोस्।
windows 99 मा अडिए विन्डोज १० का लागि अपडेट कन्फिगर गर्दै
अर्को, हामीले कुन आउटपुट प्रोफाइल प्रयोग गर्न चाहान्छौं चयन गर्न आवश्यक छ, त्यहाँ सबैभन्दा लोकप्रिय आउटपुट ढाँचाहरूको सूची छ जसमा आईप्याड, आईफोन र आईपड, एप्पल टिभी, एचटीसी, र सामसु Android एन्ड्रोइड जस्ता उपकरणहरूका लागि उपयुक्त ढाँचाहरू समावेश छन्। साथै, त्यहाँ एक विकल्प छ, तपाईं चयनित भिडियोबाट अडियो फाइल निकाल्न सक्नुहुन्छ। केवल सबैभन्दा सिफारिश गरिएको छनौट गर्नुहोस् र ठीक क्लिक गर्नुहोस्।
सन् १ 190 ०3 मा विन्डोज अपडेट हुँदैन
चयन गर्नुहोस् गन्तव्य फोल्डर जहाँ तपाईंको डिजिटल DVD भिडियो आउटपुट बचत हुनेछ। बटन 'RUN' थिच्नुहोस् र मिनेट कुर्नुहोस् डिभिडिको आधारमा, तपाईंको सेटि ,हरू, र तपाईंको कम्प्युटरको हार्डवेयरमा, यसले केहि समय लिन सक्दछ।
शुरुआतीहरू र समर्थकहरूले यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने जान्न सक्छन्, ठीक त्यहाँ मूलभूत भिडियो सम्पादन उपकरण उपलब्ध छ भोल्युम समायोजन, उपशीर्षक थप, क्रप, विस्तार, र भिडियो बचत गर्नु अघि ट्रिमको लागि।
तिनीहरूलाई पहुँच गर्न, शीर्षक एक दुई पटक क्लिक गर्नुहोस् पूर्वावलोकन विन्डो सम्पादन उपकरणहरूको साथ खुल्छ।
सामान्य ट्याबमा, तपाईंलाई दिनुहोस् अडियो भोल्युम समायोजित गर्नुहोस् , यदि आवाज धेरै शान्त हो भने।
को उपशीर्षक ट्याब तपाईंलाई कुन उपशीर्षक ट्र्याक प्रदर्शन गर्न वा तपाईंको आफ्नै उपशीर्षक (.srt) फाइल थप्न छनौट गर्न दिन्छ। र सेटिंग्स परिवर्तन गर्दा, तपाईं ती पूर्वावलोकन विन्डोमा देख्न सक्नुहुनेछ।
त्यहाँ छ क्रप गर्नुहोस् र ट्याब विस्तार गर्नुहोस् यसले तपाईंलाई फसल र विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, तपाईं प्रिसेटबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र बाकस वरपर ड्र्याग र ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ, वा नि: शुल्क फसल क्रप गर्न सक्नुहुन्छ र स्वचालित रूपमा प्रोफाइल भिडियो रिजोलुसनमा विस्तार गर्नुहोस्।
त्यहाँ पनि छ Trimtab यसले तपाईंलाई तपाईंको सुरू र समय छनौट गर्न दिन्छ। यो क्लिपहरू समात्न वा अन्त क्रेडिटहरू लुकाउनको लागि राम्रो छ।
WinX DVD रिपर प्लेटिनम निःशुल्क?
ठिक छ, तपाइँको दिमागमा तपाइँले कसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ हामी कसरी परिचय दिन्छौं WinX DVD रिपर प्लेटिनम निःशुल्क किनकि यो एक प्रीमियम डीभीडी रिपर हो। यहाँ चिन्ता नलिनुहोस् WinX डीभीडी रिपर प्लेटिनम सस्ता डाउनलोड लिंक, जहाँ तपाईं पाउनुहुन्छ WinX DVD रिपर प्लेटिनम पूर्ण सुविधाहरू पूर्ण रूपमा नि: शुल्क।
नोट: सस्ता संस्करण प्रीमियम सुविधाहरू अनलक तर तपाईं सुविधा अपडेट र समर्थन प्राप्त गर्नुभएन। र तपाईको टोलीबाट फिचर अपडेट र समर्थन प्राप्त गर्न तपाईंले उत्पादन किन्नु पर्छ।
कुल मिलाएर WinX DVD रिपर प्लैटिनम प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ तपाईलाई तेजस्वी प्रविधिको कुनै ज्ञान छैन भने पनि। जो कोहीले केहि मिनेटमा डिभिडि ब्याकअप गर्न सक्दछ। WinX डीभीडी रिपर प्लेटिनम सस्ता लाइसेन्स डाउनलोड गर्नुहोस्, तपाइँ इप्सन प्रोजेक्टर विनलाई पनि मौका दिन सक्नुहुन्छ। यसले zip फाईल स्थापना, इजाजतपत्र कोड, र प्रयोगकर्ता मार्गनिर्देशनको साथ डाउनलोड गर्दछ। सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस् र टिप्पणीहरूमा तपाईंको प्रतिक्रिया साझा गर्नुहोस्।
गुगल क्रोम उच्च सीपीयू प्रयोग गरी
android ले wifi मा जडान गर्दछ तर इन्टरनेट छैन
विन्डोज १० अपडेट पछि जवाफदेखी
अक्षरको सट्टा कुञ्जीपाटी प्रकारहरू
विन्डोज १० क्र्यास मेमोरी_मेनेजमेन्ट